"Koa miverena ho amin’Izay efa niodinanareo fatratra." Isaia 31:6
- Lota dia nonina tao Sodoma, ary lehilahy nanana ny naha izy azy tao amin’io tanàna ratsy fitondrantena io. Satria fantany fa tsy nankasitrahin’Andriamanitra ny fahavetavetana mamoafady nataon’ny olona tao, dia “nahory loatra ny fanahiny marina isanandro isanandro” (2 Petera 2:8) izay hitany sy reny. Nefa dia nijanona tao ihany izy. Nisy anjely roa voatery nitantana azy hivoaka ny tanàna, mba hahatonga azy tsy hiharan’ny fitsarana (jereo Genesisy 19).
- Davida dia nenjehin’i Saoly mpanjaka, ka nandositra sy niery tany amin’i Akisy, izay fahavalon’ny vahoakan’Andriamanitra. Saingy rehefa fantatr’ireo mpanompon’i Akisy izy, dia natahotra ny amin’ny ainy. Nanao mody adala izy (1 Samoela 21:13), ary voatery nandositra tamin-kenatra.
- Jona dia tokony nankany Ninive, araka ny baikon’Andriamanitra, nefa nandositra nandeha sambo nankany Tarsisy, toerana mifanipaka amin’i Ninive. Nahatonga rivotra mahery nampitebiteby ny tantsambo rehetra Ilay Andriamanitra Tsitoha. Koa satria i Jona no anton’io tafiotra io, dia natsipy tany anaty ranomasina izy. Ary natelina hazandrano lehibe izy, ka afaka telo andro sy telo alina dia naloany ho eny amin’ny tany maina, araka ny baikon’Ilay Mpahary.
- Petera dia mpianatr’i Jesosy, ary namindro teo anilan’ny afon’ny fahavalon’ny Tompony. Rehefa nanontaniana momba ny fifandraisany amin’i Jesosy izy, dia nandà intelo ho tsy mahalala Azy.
Tsy afaka ho sambatra na hankasitrahin’Andriamanitra ny mpino, rehefa mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra ny fitondrantenany. Nefa misy mandrakariva ny lalana ahazoany miverina. “Miverena amiko amin’ny fonareo rehetra… Miverena amin’i Jehovah Andriamanitrareo ; fa mamindra fo sy miantra Izy." (Joela 2:12-13).